वि. सं. २०७८ जेठ २३ गते, आइतवारको राशिफल - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ जेठ २३ गते, आइतवारको राशिफल
इनेप्लिज २०७८ जेठ २३ गते २:१९ मा प्रकाशित
स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आफन्तको घरमा जानु तपाईंले कल्पना गरेभन्दा पनि धेरै राम्रो हुनेछ। कसैको हस्तक्षेपले तपाईंको प्रियतमासँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुन। आफ्नो जोडीको मागले तपाईंलाई केही तनाउ दिन सक्छ।
हावामा महल निर्माण गर्नाले तपाईंलाई फाइदा हुने छैन। तपाईंले परिवारको आशा पूरा गर्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको जीवनमा एउटा विशेष ठाउँ ओगट्नेछन्। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
राम्रो स्वास्थ्यको कारण तपाईं खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनुहुनेछ। केटाकेटीलाई तपाईंको कठोर व्यवहारले तिनीहरूलाई परेशान बनाउँछ। तपाईंले आफैलाई रोक्नु पर्नेछ र यसले मात्र आफु बीच बाधा उत्पन्न गराउँछ भनेर तपाईंले याद गर्नुहोस। कसै कसैको लागि सुन्दर उपहार र फूलले भरिएको रोमान्टिक साँझ। तपाईंको तेज अवलोकनले अरूको अगाडि पुग्ने मद्दत गर्नेछ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
कुनै हटाउन नसकिने परिस्थितिले केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर तपाईंले आफ्नो समतोलन राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ र समस्याको समयाधान गर्ने तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले चिन्ता गराउँछ र उनलाई केही चिकित्सा हेरविचारको आवश्यकता पर्नेछ। यो दिन तपाईंको प्रेम जीवनको मामलामा शानदार छ। प्रेम गरि राख्नुहोस्। तपाईंका जीवनसाथीको आन्तरिक सौन्दर्य आज बाहिर निस्किनेछ।
धेरै चिन्ता र तनाउले तपाईंको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। तपाईंले मानसिक स्पष्टता कायम गर्न भ्रम र निराशा त्याग गर्नु पर्नेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आनन्दित – ऊर्जावान र मायालु मुडमा तपाईंको हंसमुख प्रकृतिले आफ्ना वरिपरि आनन्द र खुशियाली ल्याउँछ। तपाईंले उनीलाई पर्याप्त ध्यान दिनुभएन भने प्रेमी दुखी हुनेछन्। तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर दिनको अन्तमा तपाईंको जोडीले तपाईंलाई माया दिनेछन्।
प्रेम, आशा, विश्वास, सहानुभूति, आशावाद र इमानदारी जस्ता सकारात्मक भावनाहरू तर्फ आफ्नो मन आकर्षण गराउनुहोस्। यी भावनाहरू एकपल्ट पूरा स्थापित भएपछि – मनले स्वतः हरेक परिस्थितिको सकारात्मक प्रतिक्रिया गर्नेछ। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो प्रिय संगै नभएकोले तपाईंले आज परम आनन्दबाट खाली भएको अनुभव गर्ने सम्भावना छ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको दैनिक आवश्यकता पूरा नगर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईंको मुड बिग्रिनेछ।
कुनै संत झैं व्यक्तिको आशिषले मनोशान्ति दिनेछ। पुरानो सम्पर्क र सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने राम्रो दिन। कसैले तपाईँको छवि धूमिल गर्न प्रयास गर्न सक्छ, यसैले सावधान रहनुहोस्। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। कुनै घोर अपराध गर्नुहोस्। तपाईंलाई यो शान्ति कायम र ……… हटाउन आवश्यक छ आज तपाईंलाई प्रेमले बाँध्नेछ। यसको परम आनन्द महसुस गर्नुहोस्। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
असम्भवको लागि अनावश्यक सोचाइमा आफ्नो ऊर्जा बर्बाद नगर्नुहोस्, बरु यसलाई सही दिशामा प्रयोग गर्नुहोस्। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। परिवार, छोराछोरी र साथीहरूसँग समय बिताउनाले तपाईंलाई ऊर्जा सुधारमा सहायत मिल्नेछ। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।
केही मनोरञ्जनको लागि आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। हृदय नगुमाउनुहोस् – असफलता एकदम प्राकृतिक हो र तिनीहरू नै जीवनका सौन्दर्य हुन्। आज तपाईं एउटा तारा झै व्यवहार गर्नुहोस् – तर केवल प्रशंसनीय कुरा गर्नुहोस्। तपाईंको जोडीले नभएको वैवाहिक जीवन बारेमा तपाईंलाई परेशान गर्न सक्छन्।
तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूले सहायता गर्नाले तपाईं खुसी हुनुहुनेछ। आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। परिवारका केही महिला सदस्यको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता हुन सक्छ। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। महिला भेनसबाट आएका हुन् र पुरुषहरु मंगलबाट। तर आज भेनस र मंगल एक-अर्कामा पग्लेका छन्।
तपाईंको बलियो लचक र निर्भयताले मानसिक संकायको शक्ति धेरै बढाउनेछ। यो गतिलाई चलाई राख्नुहोस् जसले गर्दा कुनै पनि अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न तपाईंलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। आज आफ्नो जोडीले तपाईंको पीडा क्षण मै निकाल्न सक्छन्।